January 5, 2021 - Achawlaymyar
January 5, 2021 by Achawlaymyar
ချစ်သူစုံတွဲလေးတို့ နေ့နံတွေကို တိုက်ကြည့်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ဘက် မဖြစ်နေဘူးဆိုရင် ဗေဒင်ဆရာ၊ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ ယတြာချေတာမျိုး လုပ်ကြည့်ပါ။ ချစ်သူစုံတွဲလေးတို့ရေ လက်ထပ်ဖို့အတွက် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးချယ်ရတာ ထင်သလောက်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ တွေးရ၊ စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေကို ကြည့်ကြသလို နေ့နံနက္ခတ်တွေနဲ့လည်း ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ချစ်သူစုံတွဲလေးတို့လည်း လက်ထပ်တေ့ာမှာမို့ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ နေ့နံတွေ တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းလေး တွက်လို့ ရတယ်နော်။ ဒါဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်ရလည်း ပိုလွယ်သွားတာပေါ့။ နေ့နံ တွဲကြည့်ကြမယ် တနင်္ဂနွေနဲ့ ကြာသပတေး၊ တနင်္လာနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး၊ အင်္ဂါနဲ့ သောကြာ၊ စနေနဲ့ ရာဟုကတော့ မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေး ကောင်းပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနဲ့ အင်္ဂါ၊ တနင်္လာနဲ့ ကြာသပတေး၊ ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ … Read more
လက်ထပ်ပွဲမှာ ချစ်ရသူကိုကြည့်ပီး ၀မ်းသာအားရ ဖက်ငိုကြွေးခဲ့တဲ့ သတို့သား(ရုပ် / သံ)
ရုပ်သံဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူကို အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မိသွားတဲ့ အခါမှာ အရမ်းကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတိုင်းက တန်ဖိုးမထားတတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့သင့်ချစ်သူက သင့်ကို အခုဖော်ပြပေးတဲ့အတိုင်း ပြုမူဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူဟာ ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် သင်ဟာ တကယ့်ကိုကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ (၁) ကတိတည်တယ် သင့်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ယောက်ျားအဖို့ သူ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားဟာ သူ့အတွက် ကတိပါပဲ။ သင့်ကို ပြောဖူးတဲ့စကားတွေ၊ ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကတိတွေကို ဘယ်တော့မှ မေ့မှာမဟုတ်တဲ့အပြင် သူ့ကတိတွေကိုလည်း အမြဲတည်မယ့် သူမျိုးပါ။ ကတိတွေအထပ်ထပ်ပေးပြီး မတည်တဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့တော့ တကယ်ကို တခြားစီပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင့်ချစ်သူဟာ ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ သင့်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး အရမ်းလည်း ချစ်တဲ့သူပါ။ (၂) ကြင်နာတယ် ယောက်ျားလေးတော်တော်များများက ချစ်တော့ချစ်တယ် ဒါပေမယ့် … Read more
အိမ်​မပိုင်​တဲ့ မိန်းကေ​လးကို ချစ်​သူ​​ရွေးမယ်​ဆိုရင်​
မင်း ​ဒါ​လေးခန​လောက်​ နား​ထောင်​ကြည့်​ပါအုးံ.” ချစ်​သူဖြစ်​ပီး 1 လ​လောက်​က အရမ်းကို​အေးတိ​အေးဆက်​ နိုင်​လွန်းတဲ့ ဂျိုသားမ​လေး​တွေ​ပေါ့အဲ့ ဒဏ်​​လေးကို မင်းခံနိုင်​ပီလား..” တိုင်​ပင်​ရိုက်​​နေရင်းနဲ့ အ​ဖေသို့မဟုတ်​ အ​မေ​ခေါ်လို့နုတ်​မဆက်​ပဲ လိုင်း​ပေါ်က ဆင်းသွာရင်​ မင်းစိတ်​ထဲ ​ပေါက်​ကွဲသံစဉ်​​တွေ ထွက်​လာမှာ အ​သေချာပဲအဲ့ဒါ​လေး​ရော သည်းခံနိုင်​ပီလား..” အရမ်းလွမ်းလို့ ကိုက ဖုန်း​ခေါ်ရင်​​တောင်​ အ​ဖေ​မေရှိလို့ မကိုင်​ရဲတဲ့ အခိုက်​တန့်​ အိမ်​မပိုင်​တဲ့ ဂျိုသားမ​လေး​တိုင်းမှာ ရှိတယ်​ ​အေ ဖုန်း​ပြောရပီဆိုလဲ မဟုတ်​တာ လုပ်​ထားသလို ခိုး​ပြောရတာ မင်းချစ်​နိုင်​တာ ​သေချာတယ်​​ပေါ့..” သူများ အတွဲ​တွေ လူသိရှင်​ကြား Ani ​တွေလုပ်​လို့ကို​တွေလုပ်​ရမယ်​ ထင်​​နေလား အ​ကောင့်​ထဲ အမျိုး​တွေရှိလို့ ဆိုတဲ့ အ​ကြောင်းပြချက်​ကြီးကိုမင်းစိတ်​ရှည်​ရှည်​နဲ့ သီးခံပီနိုင်​လား…” တခါ​​လောက်​ ​တွေ့ဖို့ကို ​ပြောလိုက်​ရတာအကြိမ်​​ပေါင်းမနည်း ​တွေ့ရမှာ​ပေါ့ တလ တခါ​လောက်​ အေ … Read more
အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည်စုပ်ထိုးဆိုတာက ပြုလုပ်ပြီးရင် ပြန်ပြင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ သင့်ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ သင့်ရဲ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အတူကုန်ဆုံးဖို့၊ အရာရာအားလုံးကို ဝေမျှခံစားဖို့၊ ပေးဆပ်တတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတာက စိုးရိမ်စရာဖြစ်သလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်ကန်စေဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ဘ၀လက်တွဲဖော်ဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းထားသူကို ဒီမေးခွန်းတွေ မေးကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ၁။ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိမရှိ ဒီမေးခွန်းက အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ကလေးရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းက အပြောင်းအလဲတွေ အများရှိဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အချိန်ယူမယ်၊ ဘယ်နှစ်ယောက်ယူမယ် စသဖြင့် ကြိုတင်ဆွေးနွေးထားသင့်ပါတယ်။ ၂။ တစ်ဦးရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အယူအဆတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ တစ်ဦးက … Read more
သူ့စိတ်ထဲမှာ မင်းကို ရှိတယ်လို့တောင် သတ်မှတ်မထားထားတဲ့ လူကိုမှ အတွေးထဲမှာ ထည့်ထားရတာ မပင်ပန်းဘူးလား …? အဖက်မလုပ်တဲ့ လူကိုမှ နှလုံးသားထဲထည့်ထားရတာ မွန်းကြပ်ပြီး ပူလောင်မနေဘူးလား …? မင်းကိုယ်မင်း သနားညှာတာ သင့်ပါပြီ …။ သူ့စိတ်နဲ့ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ချိန်တွေကို လက်ချိုးရေတွက်ကြည့်ပါအုံးလား …၊ စားလည်း ဒီစိတ် သွားလည်း ဒီစိတ်နဲ့ မင်းဘဝရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အဲ့ဒီစိတ်အောက်မှာပဲ ကုန်ဆုံးစေတော့မှာလား အဲ့ဒီ ခံစားချက်က မင်းတစ်ယောက်ထဲ ခံစားဖူးတာမှ မဟုတ်တာကွာ လူတိုင်းခံစားဖူးတာပေါ့ …။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းတော့ မင်းလို ဖြစ်မနေဘူး အရမ်းကြီး စွဲလမ်းပြီး ခံစားမနေပါဘူး …။ အလွန်ဆုံး ခံစားရ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိပေါ့ …။ ဒါ့ကြောင့် မင်းရဲ့ မရပ်နိုင်သေးတဲ့ … Read more
သိပ်အနိုင်ယူလွန်းတဲ့သူတွေက တစ်ချိန်ချိန်မှာရင်ကွဲပတ်လက် ကျန်ခဲ့ရတတ်တယ် ။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို တွေ့ဖူးတယ် ။သူ့ ချစ်သူ ကောင်မလေး အပေါ်မှာသိပ်အနိုင်ယူလွန်းတာများ ဘေးကလူတောင်ဝင်တားရတာမျိုး အထိ။ရန်တွေ ဖြစ်ပြီး အနိုင်ယူတယ် ။သူ့ ဘက်က စိတ်တွေ အရင်ဆိုး ၊စိတ်တွေ အရင်ကောက်ပြီး အနိုင်ယူတယ် ။ စကားပြောရင်တောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း။သူ game ဆော့နေတဲ့ အချိန် ကောင်မလေး ။ဖုန်းဆက်လိုက်လို့ကတော့ အော်ပြီ ငေါက်ပြီ ။ဒီလိုမျိုး စရိုက် ရှိတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကိုဟိုဘက်က ကောင်မလေးများ ချစ်လိုက်တာ တုန်လို့ ။ အရမ်းသည်းခံတယ် ။ငေါက်နေရင် ၊ အော်နေရင်တောင် မျက်ရည်လေး ဝဲပြီး ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ပဲ ကြည့်နေရှာတာမျိုး။ ဒါပေမဲ့ပေါ့ ။တစ်ဖက်က အရမ်းချစ်ပြီး ဂရုစိုက်ပေမဲ့လည်းထက်တူညီ တုန့်ပြန်မှုတွေ ရောက်မလာတဲ့နောက်ဆုံးတော့ ကောင်မလေး ဘက်က စ … Read more
သင်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သင့်ဘေးက ထွက်ခွာမသွားမယ့် ချစ်သူမျိုးဆိုတာ ဒီလိုပါ
ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေမရှားပေမယ့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ထာဝရချစ်သွားမယ့် ယောက်ျားလေးမျိုးကတော့ရှိတော့ရှိတယ်၊ ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ အခု Auntymay ပရိသတ်ကြီးကို အဲ့ဒီလို ခပ်ရှားရှားယောက်ျားလေးတွေရဲ့အမူအကျင့်တွေနဲ့သူတို့မှာ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ဘယ်လိုအချက်လေးတွေရှိနေ တယ်ဆိုတာ ပျိုမေလေးတွေသိစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. ။ (၁) ပြဿနာကို ခေါင်းမရှောင်တတ်ဘူး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတစ်ဘ၀လုံးစာရည်ရွယ်ထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံပါစေ ရှောင်ပြေးမသွားပါဘူး။ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး အရက်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖြေသိမ့်နေမယ့် သူမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အတွက် တခါတလေ ငြီးငွေ့စရာကောင်းခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ဂရုစိုက်မှု၊အလေးထားမှုတွေနဲ့ သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာပါ။ (၂) သင့်ဘက်ကိုအမြဲစဉ်းစားပေးတယ် ယောက်ျားတစ်ယောက် ဥာဏ်ပညာကြီးတာဟာ သူဘယ်လောက်ထိ စမတ်ကျတယ်၊ ထူးချွန်ထက်မြက်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာမမူတည်ဘဲ ကြုံတွေ့လာတဲ့ အခက်အခဲ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်တွေ ဘယ်လောက်ပေးနိုင်သလဲ၊ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံရဲ့အမြင်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ အဲဒီလိုချစ်သူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ … Read more
“ငါ့တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလိုလုပ်ရအောင်” လည်ပင်းက နားကြပ်ကို ခဏဖြုတ်ထားခဲ့၊ ပခုံးပေါ်က အပွင့်တွေ ခဏဖြုတ်ထားခဲ့၊ ခေါင်းပေါ်က အင်ဂျီနီယာ ဦးထုပ်ကို ခဏချွတ်ထား၊ မင်းရဲ့Certificate တွေ ဘွဲ့ လက်မှတ်တွေ ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတွေ အိမ်မှာထားခဲ့ မင်းရဲ့ရင့်ကျက်မူတွေ လူကြီးလူကောင်းဆန်မူတွေ၊ ခဏလောက် သော့ခတ် သိမ်းထားခဲ့။ ဆယ်​တန်း အောင်​တာ မအောင်​တာတွေ မေ့ထားခဲ့ လက်​လုပ်​လက်​စား ဘဝတွေ ရာထူးဂုဏ်​ရှိန်​ဝါတွေ ခန ဖယ်​ထားခဲ လာပါ သူငယ်ချင်း ။ အဝတ်အစား တွေ သိပ်ကြီး အဖိုးတန်တွေ မဝတ်ခဲ့နဲ့တော်ရုံ သင့်ရုံ ဆိုရပြီ။ နောက်တစ်ခုက ကိုင်နေကျ … Read more
သင့်ချစ်သူကို တခြားမိန်းကလေးတွေဆီ စိတ်မရောက်စေချင်ရင် သိထားရမယ့်အရာတွေ
သင့်ချစ်သူကို တခြားမိန်းကလေးတွေဆီ စိတ်မရောက်စေချင်ရင် သိထားရမယ့်အရာတွေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလိုချင်ဆုံးဆန္ဒတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်အပြင် တခြားကောင်မလေးတွေကို ရှေ့တင်မှာရော၊ နောက်ကွယ်မှာပါ စိတ်မဝင်စားပဲ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ ချစ်နေစေချင်တာပါပဲ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အဲလိုချစ်နေစေချင်တဲ့ ပျိုမေလေးတို့ရဲ့ ဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ (၁) သူ့ဘဝအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားပါ ဒါဟာထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ချင်စရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်ဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ သူဘာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလဲ၊ ဘာတွေဝါသနာပါလဲဆိုတာကို အမေးအဖြေတစ်ခုကို သဘောထားပြီး မေးနေမယ့် အစား၊ သူ့ဘဝထဲကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ၊ သူဘယ်အရာမှာပျော်လဲ၊ ဘာတွေလုပ်ရတာကြိုက်လဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ဝင်ပြီး မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူစိတ်ဝင်စားတဲ့၊ သူနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကို အတွဲညီညီလေး လိုက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုမှ တမ်းတမ်းမစွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုသွားစွဲမလဲနော့။ (၂) အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်နေပါ ယောက်ျားလေးတွေဟာ တော်ရုံတန်ရုံကိစ္စလောက်ကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါတယ်။ အဓိကကတော့သင်ဟာ ခန့်မှန်းရလွယ်တဲ့၊ ချုပ်ကိုင်ရလွယ်တဲ့သူတစ်ယောက် … Read more
ဖူးစာဆိုတာ ဗွေမပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သင့် ဖူးစာဖက်မှာဆိုရင်တော့ သူ့မှာ ရှိကိုရှိနေမယ့် အချက်တွေ ရှိနေမှာပါ။ အသွင်တူမှ အိမ်သူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အလကားပြောခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဖူးစာဖက်ဆိုတာမျိုးက သင့်ရဲ့ နောက်ကိုယ်ပွားတစ်ခုပဲ ဖြစ်လို့ သင်ရဲ့ မသိစိတ်ကနေ သိနိုင်သလို ဒီအချက်တွေကနေလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ (၁) သင်နဲ့ အမူအကျင့်တူတယ် လူတူမရှား နာမည်တူမရှားဆိုပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမူအကျင့်တွေ တူတာကတော့ မောင်နှမ မဟုတ်ရင် အတော့်ကို ရှားပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို မောင်နှမအချင်းချင်းတောင် အမူအကျင့်မတူကြပါဘူး။ သင်က အသန့်ကြိုက်တတ်တယ်။ သန့်ရှင်းမှုကို သတိထားကြည့်မိတတ်တဲ့သူ ဖြစ်မယ်ဆို သူကလည်း အဲ့အကျင့် ရှိနေတာမျိုး၊ ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်ကို ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆောင်ထားတတ်တာမျိုးဆို သူလည်း အဲ့လိုမျိုး တူနေတာမျိုး၊ သင်တို့နှစ်ယောက်က တူနေတဲ့အခါ သိပ်အားနာစရာမလိုသလို … Read more